Yabelana njengomfanekiso: Gqamisa, cofa kwaye wabelane ngombhalo | Martech Zone
NgoLwesihlanu, ngo-Ephreli 19, 2013 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 Douglas Karr
Kuya kufuneka ndenze ukusayina incwadi kunye Beth Hayden kwiNtengiso yeNtlalontle yeHlabathi, umbhali we Ubunjani: Isikhokelo esigqibeleleyo sokuThengisa ishishini lakho ngePinterest.
Esinye sezixhobo uBeth abelana ngazo kwincwadi yakhe elula kakhulu kodwa enkulu kakhulu ibizwa ngokuba Yabelana njengoMfanekiso. Kwiimali ezimbalwa, ungatsala ibhukumaka kwibar yesixhobo sakho kwaye emva koko uguqule nasiphi na isicatshulwa sibe ngumfanekiso okwabelwana ngawo. Ilahle ifile ngokulula ngeempawu ezimbalwa kakhulu ... kodwa iyabakhohlisa!
Kukho amaxesha ebhlog yam xa ndifuna ukuthatha isicatshulwa sebhloko kwaye ndiyenze ime ngaphandle komzimba weposi. Le yeyona ndlela ilungileyo yokwenza oko - ingandiniki nje kuphela umfanekiso endinokusebenzisa omnye umbhalo ngokubhekisele kulwazi lokukhangela umfanekiso, kodwa into ebalaseleyo phakathi kokubhaliweyo kwiposti yebhlog.
Ukuba ufuna into ethe kratya ngakumbi, apho unokongeza khona umfanekiso ongasemva kwaye wenze imveliso ikulungele kakhulu, iBeth nayo ikuluhlu PicMonkey njengesixhobo esihle sokuhlela iifoto onokuthi usenze ngokwezifiso isicatshulwa.
tags: beth haydenpicmonkeyukuvelayabelana njengomfanekiso